CCA oo dugsi wax lagu barayo Haweenka maxaabiista ka hirgelisay Xabsiga dhexe – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Munaasabad lagu daah furayay Dugsi wax lagu bari doono haweenka Maxaabiista ah ayaa shalay lagu qabtay xarunta xabsiga Dhexe, iyadoo Dugsigan ay hirgelisay Hey’adda Wacyi gelinta Bulshada ee CCA.
Furitaanka Dugsigan ayaa waxaa ka qeyb galay Wasiiradda Haweenka iyo Xuquuqda Aadanaha Marwo Sahra Maxamed Cali Samatar, Xeer Ilaaliyaha Guud ee Qaranka Axmed Cali Dahir, Taliyaha Ciidamada Asluubta Jen, Bashiir Maxamed Jaamac, Madaxda Hey’adda CCA.
Wasiirada Haweenka iyo Xuquuqda Aadanaha Sahra Maxamed Cali Samantar oo ka hadashay Munaasabadda ayaa ku ammaantay dadaalka ay Hey’adda CCA wado, iyadoo xustay inay wadaan barnaamijyo lagu hormarinayo bulshada
Sidoo kale waxaa ay sheegtay in Wasaaradda Haweenka iyo Xuquuqda Aadanaha ee Xukuumadda Federalka ay diiyaarinayso Sharciga Xuquuqda Gabdhaha Soomaaliyeed, iyadoo tilmaantay in tacadiyo badan loo geysto gabdhaha, isla markaana lagu xadgudubo Xuquuqdooda.
Xeer-ilaaliyaha Guud ee Qaranka, Dr. Axmed Cali Daahir ayaa sheegay in Dugsiga wax lagu bari doono Gabdhaha Maxaabiista ah, isagoo ku tilmaamay inay tahay tallaabo wanaagsan in xarun Waxbarasho loo furo Maxaabiista, si sare loogu qaado Aqoontooda.
Waxaa uu u mahad celiyay Hey’adda Wacyi gelinta bulshada ee CCA, isagoo ku bogaadiyay fikirka wanaagsan ee ay ku soo kordhiyeen horumarinta aqoonta Maxaabiista ee ku xiran xabsiga Dhexe.
Taliyaha Guud ee Ciiddanka Asluubta Soomaaliyeed Jeneral Bashiir Maxamed Jaamac oo ka hadlay munaasabada ayaa faah faahin ka bixiyay xaaladda iyo nolosha Maxaabiista iyo Tallaabooyinka lagu horumarinayo Dhismaha Xabsiga.
Jen, Bashiir ayaa uga mahad celiyay in Hey’adda CCA, gaar ahaan Guddoomiyaheeda Maxamed Cajiib uu todobaad gudihiis ku aqbalay codsigooda, isagoo ka hirgeliyay xabsiga Dhexe Dugsi wax lagu baro Haweenka Maxaabiista ee ku xiran xabsiga.
“Hey’adda Wacyi-gelinta bulshadda ee CCA waxay muddo isbuuc ah ku fuliyeen codsiga ku aadan dhismaha Dugsiga u gaarka ah Gabdhaha Maxaabiista”ayuu yiri Taliyaha Ciidamada Asluubta oo hoosta ka xariiqay haddii Hay’ad kale lala kaashan lahaa dhismahaasi inay muddo saddex bilood ah ku qaadan lahayd si ay uga soo jawaabaan codsigaasi.
Guddoomiyaha Hey’adda CCA Maxamed Ibraahim Cali (Cajiib) ayaa sheegay isna u mahadceliyay Taliyaha Ciidanka Asluubta oo dadaal u galay sidii maxaabiista ku jirta xabsiga ay xuquuqdooda u heli lahaayeen, isla markaana laga hormarin lahaa dhinaca aqoonta.
“Shaqaalaha Hey’adda CCA ayaa iska soo uruurisay Kharashka lagu hirgeliyey Dhismaha, mana jirto Hey’ad ama Dowlad gaar ah oo Hay’adda CCA taageero ka siiyey fulinta Dugsiga u gaarka ah Gabdhaha Maxaabiista”ayuu yiri Maxamed Cajiib oo intaa ku daray in Hey’adda CCA ay leedahay Fikirka, maalgelinta iyo Hirgelinta Dhismaha Dugsigaasi.
Sidoo kale waxaa uu xusay in Hey’adda CCA ay qorshaha ugu jirto in xabsiga Dhexe ee Xamar ka hirgeliyaan Dugsi u gaar ah Ragga Maxaabiista ah, si kor loogu qaado aqoontooda.
Waxaa uu sheegay in marka uu qofku aqoon leeyahay inuu garan karo Jihadda Fiican ee Nolosha, balse marka uu qofka jaahil yahay uu had iyo jeer galayo falal dembiyeedyo ama uu noqanayo qof aan mustaqbal lahayn.
Si kastaba ha ahaatee waa markii u horeysay ee Dugsi u gaar ah Maxaabiista, gaar ahaan Haweenka laga hirgeliyo Xabsiga Dhexe.